Ibheke imali, le ndoda yanquma ukuhlasela intombi yayo eyayimthanda yize yayiphikiswa ngabazali bayo: yinhle kakhulu, ngaphambili, manje sekuy ...	Funda kabanzi
Bheka isithombe esihle lesi (umfanekiso), awumuhle udadewethu? Ngeshwa, kulandela izinkolelo ezingenasisekelo futhi "eziwubuphukuphuku", ama-albino ashushiswa, bese edonswa phansi ...	Funda kabanzi
Lokhu kudinga nezimfuno zokuqala ezifana nolimi olujwayelekile, noma okungenani izilimi zesifunda zase-Afrika zomdabu wezwekazi. Ngakho-ke, maqondana ne-Kiswahili - vele ...	Funda kabanzi
NjengaseNamibia, i-colonization yaseJalimane yaseTanganyika ibonakala ngodlame oludlulele. I-Reich ibulala amakhosi aphikisayo noKarl Peters, umholi wamakholoni, izuza i-no ...	Funda kabanzi
Ngemuva kokuqeqeshwa, izinduku ezincane zisebenza futhi zisebenza kahle kakhulu. "Amagundane ayizidalwa ezinhle futhi ezihlakaniphile," kusho yena! E ...	Funda kabanzi
I-Wema Sepetu, wonke umuntu wavumelana ngobuhle bakhe, ngokuwina uMncintiswano we-Miss Tanzania 2006. Ube ngumdlali wezintatheli odumile, uWema Sepetu usanda kudala izambulo ...	Funda kabanzi